ဆရာဗဟိုပြုလား၊ ကျောင်းသာ ဗဟိုပြုလား မသိသော သင်ကြားခြင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဆရာဗဟိုပြုလား၊ ကျောင်းသာ ဗဟိုပြုလား မသိသော သင်ကြားခြင်းများ
ဆရာဗဟိုပြုလား၊ ကျောင်းသာ ဗဟိုပြုလား မသိသော သင်ကြားခြင်းများ
Posted by gigihan on Jul 25, 2011 in Education, Think Tank | 14 comments
ကလေးတွေ စာမေးပွဲကို ၂၇ ရက်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီး သောကြာနေ့မှာ မြန်မာစာကို ၂၂ ပုဒ်ပေးတယ်။ တနလ်ာနေ့မှာ ထပ်ပေးသေးတယ်။ ပြီးတော့ စာတွေကို လုံးဝ ပြန်ပြီးစစ်ဆေးပြီး အမှတ်မခြစ်ပေးဘူး။ ကလေးတွေကို ၀ါကျ ကိုယ့်ဘာသာဖွဲ့ဆိုပြီး အိမ်စာပေးတယ်။ ပြန်စစ်မပေးလို့ အမှားတွေ သာ ကလေးတွေက ကျက်ဖြစ်ရင် စာမေးပွဲမှာ မှားတယ်ဆိုပြီး အမှတ်လျော့အုံးမယ်။ အခု ဆရာဗဟိုပြု သင်ကြားရေးလား၊ ကျောင်းသား ဗဟိုပြု သင်ကြားရေးလား မသိပါဘူး။ စာမေးပွဲမှာ ၏ ၊ သည် က အစ ၏ ရေးရမယ့်နေရာ သည် မရေးရင် အမှတ်လျော့တယ်။ ပါ မပါရင်လည်း အမှတ်လျော့တယ်။ မြန်မာစာ တွေက အဲ့လောက် လိုလားဟင်။ မသိလို့မေးပါရစေ။ ၏ နဲ့ သည် နဲ့ မှားရေးမိရင် တော်တော့်ကို စာလုံး အဓိပါယ်များပြောင်းသွားပါသလား။ သိသူများရှိရင်ဖြေပေးပါ။ တကယ်မသိလို့ မေးတာပါ။ ပြီးတော့လည်း တစ်ဘာသာကို စာအုပ်က ၃၊ ၄ အုပ်ထုတ်ရတယ်။ ၆ ဘာသာရှိရင် ကလေးတွေ လွယ်အိတ်ကို သွားလွယ်ကြည့်လိုက်။ ဖတ်စာအုပ်တွေကလဲ လေးသေး။ ဒီကလေးလေး တွေ အရွယ်နဲ့ လွယ်ရတာ ရှေ့ကို တစ်လံလောက် ငိုက်စိုက်နေကြပြီ။ ကလေးတွေ ကို သနားဘို့ကောင်းတယ်။ လွယ်အိတ်နဲ့လူနဲ့ မမျှ။ မလိုအပ်ရင် အဲ့လောက်စာအုပ်ထုတ်စရာမှ မလိုတာ။ ပြီးတော့ အိမ်စာပေးလိုက်တာတွေလည်းများတော့ စာကျက်ချိန်တောင်မရှိဘူး။ ကူးလိုက်ရတဲ့စာ။ ဆရာမတွေက စာတွေကိုလဲ သေချာမခြစ်ဘူး။ ဘာရေးထားရေးထား အားလုံးအမှန်ဘဲ။ အဲ့ဒီအတိုင်းဖြေလိုက်လို့ကတော့ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ တော်တော် ကွာသွားပြီ။ အရင်ခေတ်က ဆရာမတွေနဲ့။ အခုခေတ်ဆရာမတွေ။ စိတ်ပျက်ပါ့။
View all posts by gigihan →
student-centered ပညာရေးစနစ်ဆိုတာ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတွေမှာတောင် ပုံပေါ်ယုံလေးဖြစ်ဘို့ မနည်းကြိုးစားရပါတယ်။ ငွေကြေးဘတ်ဂျက်၊ သင်ကြားနိုင်မှုနည်းစနစ်၊ အရည်အသွေးထိန်းကျောင်းမှု စနစ်၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဥပဒေအားပြုထောက်ပံ့မှု တွေ ဘက်စုံရှိရပါတယ်။ ၀န်ကြီးမင်းများ ကျောင်းတွေဆင်းပြီးရုပ်ပြကောင်းအောင် တီဗွီ။ သတင်းစာမှာ ပါရုံလေး လုပ်ပြလို့မပြီးပါဘူး။ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဘိုလဲလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ဒီအဖြစ်မျိုးရောက်ဘို့ ဒီကနေ့ အုပ်ချုပ်သူ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ institutions တွေကစပြီးအတ်ချမတ်ချဆွေးနွေးကြပြီး၊ ညာတတ်ကိုဦးစားပေးနေရာပေးနိုင်ဘို့လုပ်နိုင်တာတောင်မှ နှစ်ရာစုနဲ့ ချီပြီးစောင့်ရဦးမယ်ဆိုရင် မောင်မိုးညိုကို လွန်တယ်လို့ပြောကြမလား။
ဒီကလေးတွေ ဘယ်လိုကြီးပြီး အရွယ်ရောက်မလဲ၊ ဘယ်လိုတိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုကြမလဲ
ကလေးတွေ(မူလတန်း) ကျောင်းမှာ သဘာဝသိပ္ဖံ နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တယ်
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအပင်ငယ်များကိုပြောပါဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အိမ်မှာပြန်မေးကြည့်ဖြစ်တယ်
ကဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦး ဘာပင်တွေ တွေ့လဲဆိုတော့ တွေ့တဲ့ အပင်ဆိုလို့မရဘူး ဆရာမသင်တဲ့အပင်ပဲ ဆိုရမယ်တဲ့ ကလေးရွတ်သွားတဲ့အထဲ သူမသိတဲ့ အပင်လဲပါတယ် ကလေးတွေမှာ ဘယ်လိုအပင်က အပင်ငယ် ဘယ်လိုအပင်က အပင်ကြီးဆိုတဲ့ သဘောတရားကို စိတ်မ၀င်စားဘူး ဒီလိုမေးရင် ဒီလိုရွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာပဲ ခေါင်းထဲမှာရှိတယ် ဒီလို အရွယ်ကတဲက လွတ်လပ်စွာ စူးစမ်းခွင့် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့်မရှိ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးချင်စိတ်မရှိ ဆရာသင်တဲ့
ဘောင်ခတ်ထားတာလေးတစ်ခုပဲ အမှန်ဆိုတာစွဲနေတော့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကျမလဲ
ကိုယ့်မှာ အစိုးရကျောင်းမှ မထားရင် တခြားကျောင်းလဲ မထားနိုင် …
ကျောင်းမှာကျတော့လဲ တက်အောင်မသင် ကျူရှင်ထားပြန်တော့လဲ (ဆရာမ သင်တဲ့ကျူ၇ှင်)
စာမွေးပွဲမှာ မေးတာလေးတွေကိုပဲ သင်တော့ ဒီထက်ပိုမတက် မေးခွန်းလေးများ နည်းနည်းလှည့်ရင်
ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး ..
အဲတော့ အိမ်ကျရင် အမေတွေ အစ်မတွေ အဒေါ်တွေက တစ်ခါပြန်သင်နဲ့ သူတို့မှာ ကစားဖို့ နားဖို့ အချိန်တောင် သိပ်မရှိတော့ရှာဘူး ……
ဟုတ်ပါ့။ အရှေ့နဲ့ အနောက်နဲ့ မှားရေးလို့မရ။ အဓိပါယ်တူလည်း ဆရာမခေါ်ပေးတာနဲ့ မတူရင် အမှတ်မရ။ ဖျက်ရာပါလည်း အမှတ်လျော့နဲ့ နောက်ဆုံး သုည ဘဲကျန်တော့မယ်။ အမှတ်မခြစ်ပေးတာ အဆိုးဆုံးဘဲ။ ရှားရှားပါးပါး အမှတ်ခြစ်တဲ့ဆရာမ ရှိတော့လဲ အမှားတွေကို အမှန်ခြစ်ပေးသွားတယ်။ အိမ်ကမိဘတွေက ဘာကို ဘယ်လိုသင်ရမှန်းမသိဘူး။ ကျောင်းက သင်တဲ့အတိုင်း မဟုတ်ရင် အမှတ်မရတာက ရှိသေး။ ဆရာမတွေ မလုံလောက်တော့ ဒီပညာရေးကို ဘယ်လို ခံစားပြီး စာဆက်သင်သင့်လဲ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီ။
စနစ်တွေအကုန်လုံးက တောပျက်နေတာပါပဲ ပညာရေးတစ်ခုတည်ကြည့်လိုမရပါဘူး
ဆရာတွေကို အပြစ်တင်လိုလဲ မရပါဘူး စနစ်တွေခေတ်တွေကြောင့်ပါ ဘယ်အဖွဲအစည်မှာဖြစ်ဖြစ်
အထက်ကို အရမ်းဖားရပြီး ဘာအလုပ်နဲ ရတဲငွေပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေရှိသူကိုသာ အခွင့်အရေးပေးသော
ဒီလို ခေတ်အခြေအနေမှာ ဘယ်သူကိုမှအပြစ်မတင်သင့်ပဲ မိမိတိုတတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး
ပြုလုပ်ပေးရင်း မိမိတိုလိုလူတွေများလာရင် နောက်အနာဂတ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခေတ်သစ်တခုဖန်တီး
ဆရာမတွေ ခမျာမှာ သနားပါတယ် .. ဒီလိုမှ အမှတ်မဖျက်ရင် ဘက်လိုက်တယ် အပြောခံရမှာကိုး
ကလေးတွေလဲ သနားပါတယ် .. နှစ်ချိန်ကျောင်း ဆိုရင် မနက် ကျောင်းတက် .. နေ့လည် ကျူရှင် .. ညနေ စာဖတ်ဝိုင်း .. ည အိမ်မှာ အမေက စာကျက်ခိုင်းသေး .. ဒီကြားထဲမှာ ကိုရီးယားကားတွေလဲ ရှိ ..
သူတို့လေးတွေဘ၀မှာ အားကစား ဆိုတာ ဘာမှ မသိ .. ဗဟုသုတအတွက် စာ ဆိုတာလဲ အရုပ်များများ ပါတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေသာ ရှိ ..
ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ အခုအချိန်က ကျောင်းသားကိုဗဟိုပြုတဲ. သင်ကြားရေးစနစ်ကစတင်သင်.ပါပြီ စတင်နေပြီလို.လဲပြောလို.ရတယ်ဗျ
ဒီတစ်ခေါက်ကျနော်အိမ်ပြန်တာ သတင်းတစ်ခုကြားခဲ.ရတယ် အဲ.ဒါက ကျနော်တို.မြို.က အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ.မိဘတွေကို ကျောင်းစတက်တဲ.နေ.မှာပဲ ကျောင်းဝန်းထဲထိလိုက်ပို.တာကိုခွင်.မပြုတော.ဘူးတဲ.ဗျ ပြီးတော. ကျောင်းမှာစာသင်တာလဲပုံစံပြောင်းသွားတယ်တဲ. အရင်က ဒီဆ၇ာက သင် ဒီဆရာကပဲမေးခွန်းထုတ်နဲ.တဲ. အခုတော. အတန်းအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင် မေးခွန်းထုတ်တယ်ပြောတယ် ကျောင်းတွင်းစာမေးပွဲတွေအတွက်ပေါ.ဗျာ
ကျနော်ကတော. အဲ.ဒီသင်ကြားရေးစနစ်ကိုသဘောကျတယ်ဗျာ ကလေးတွေလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ်.အားကိုယ်ကိုးချင်စိတ်ပေါက်လာမယ်ထင်တယ်ဗျာ
မထင်ပါနဲ့။ တစ်ချို့ကလေးတွေ အမှားတွေကို အမှန်လုပ်ပြီး ခြစ်ပေးလို့ သွားပြောရင် ကိုယ့်ကလေးကို ငြိုးပြီး စာမေးပွဲမှာ အမြဲ ဆုရတဲ့ ကလေးက တန်းခွဲ (ဘီ) ကိုရောက်သွားလို့ ကျောင်းပြောင်းသွားရတဲ့ သာဓက တောင်ရှိသေး။ ကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေလဲ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ ကိုယ်သိတဲ့ကျောင်းကတော့ လုံးဝ စိတ်ပျက်တယ်။
အောက်ထစ် သုံးသိန်းခွဲ ဘဲ
၏ နဲ့ သည် နဲ့ မှားရေးရင်ဘာမှမဖြစိပေမဲ့အဓိပါယ်ကပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်မြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်ဖို့က
အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ် စာလုံးအထားအသို မှားရင်တော့ဘယ်လောက်စာတော်တဲ့လူဖြစ်ပါစေဂုဏ်ထူးမှတ်မရနိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြားရင်း
ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တုန်းကဆို ကလေးတွေနေ့လည်ကျောင်းဆင်းတာတွေ မြင်ပြီးကိုယ့်နာရီများမှားလားလို့ ပြန်ကြည့်ရသေးတာ မန်းလေးမှာဆို မနက်၉နာရီကနေ ညနေ၃ခွဲအထိဗျ
မနက်ဆို၈ခွဲအရောက်ပေါ့ဗျာ ညနေကျရင်ကျူရှင်တက် ပြန်လာရေချိုး ထမင်းစားနား စာကျက် အိပ်
အိပ်ချိန်တစ်ခုပဲအားလပ်ချိန်ထင်ပါရဲ့ဗျာ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုလဲ အင်္ဂလိပ်ကျူရှင်နဲ့ ကျောင်းဆရာမကခေါ်
ဒီအကြောင်းတွေက ပြောလို့ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ဖြေမယ့်စာမေးပွဲကို မနေ့က စာပုဒ်ကြီး ၄ ပုဒ် ထပ်သင်တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမက ပြောသေးတယ်။ ငါ မသင်ရင် ကျောင်းသားမိဘတွေက ဆရာမကြီးနဲ့ တိုင်မှာစိုးလို့ ငါ အတိုင်ခံရမှာမို့လို့ အမှီပေးတာတဲ့။ ဟဟ။ တစ်လလုံး သင်ရမယ့်စာတွေကို ၃ ရက်နဲ့ အပြီးသင်တဲ့ ဆရာမတွေ ကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမလဲ မသိဘူး။ တစ်လလုံးဘာတွေလုပ်နေလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရယ်၊ ကိုယ်စောင့်နတ်ရယ်ဘဲ သိပါတယ်။